စျေး နုန်း လေး သိ ချင် လိူ. — MYSTERY ZILLION
စျေး နုန်း လေး သိ ချင် လိူ.
October 2008 edited November 2008 in Other
ကျွန် တော် computer လေး ဘယ် လောက် နဲ.ရောင်း ရင် ကောင်း မ လဲ သိ ချင် လို.ပါ ။
MSI p35 board
Seagate 250 G HDD (sata)
အဓိကဖြစ်တဲ့ CPU တွေ နောက် Graphic card memory တွေလဲထည့်ရဦးမယ်လေဗျ
CPU duel core 2.0
HDD 250 seagate
၀ယ် ထား တာ မ ကြာ သေး ဖူး
၃ လလောက် တော.ရှိ ပြီ။
Game Play လို. မ ကောင်း လို.:D:D:D
Game Play ချင်ရင် VGA ကဒ် ထပ်ဆိုက်လိုက်လေ။ onboard မို့လို့ ဆော့လို့ မကောင်းတာ နေမှာပါ။ ကျန်တာတွေက မဆိုးပါဘူး။ ပြန်ရောင်းရင်တော့ ၀ယ်တဲ့ စျေးအတိုင်း ပြန်ရနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒါကတော့ ကွန်ပျူတာစျေးနှုန်း အကြမ်းဖျဉ်း တွက်လို့ ရတဲ့ ဆိုဒ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
mdy မှာဆိုရင် 150,000Kyats ထက်ပိုရမှာမဟုတ်ဘူး.......(ဒါတောင်ပိုပြောထားတာ)
site ကတော့ မမှန်ပါဘူး..စျေးနှုန်းတွေက
ကိုယ့် ရောင်းချင်တဲ့ product ရဲ့ တံဆိပ်ကို ဒီမှာ ဘယ်သူကိုယ်စလှယ်ယူထားလဲ...ဟီး..:D:D ဒီမှာပြန်မသွင်းဘူး...ဒီကနေ တဆင့် ပြန်ယူတဲ့ ဆီကို သွင်းတယ်......နှစ်ဆင့်ဆိုပြီးစျေးပိုမရဘူးလို့ မထင်နဲ့ သူတို့ကလဲ အနည်းနဲ့အများပြန်စစ်တယ်.....အပြင်မှာဒီလိုပိုက်ပိုက် ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးရောင်းတာထက်တော့သာပါတယ်........
တော် ပီ ဗျာ..ရောင်း တော.ဗူး...
Mother board နဲ. CPU ပဲ change လိုက် တော. မယ်
ပိုက် ပိုက် ရှိ ဗူး :O:O:O
ပိုက်ပိုက် မရှိဘူးလဲ ပြောတယ်။ mother board နဲ့ processor တော့ လဲမယ်တဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံ အနေအထားနဲ့ ယှဉ်ရင် processor duel core 2.0GHz က မနိမ့်ပါဘူး။ မာသားဘုတ်(MSI P35) ကလည်း ဒီလောက် အနိမ့်ကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ (ကျွန်တော့ အထင်ပေါ့) ဂိမ်းဆော့ဖို့လောက်ဆိုရင် VGA ကဒ် 256 MB လောက် ထက်ဆိုက်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သိသလောက် အကြံပေးကြည့်တာပါ။
သား က Crysis က စား ချင် တာ ဗျ.....:D:D:D
ဘာ လုပ် လိုက် ရ မ လဲ ဗျာ ...:O:O:O
I think your computer needs only VGA so add 512 NB Nvidia card that will solve I hope.
Nvidia 8500/512M will be suitable for you.
If you can spend more, 8600/512 is around 100usd.
Below is Crysis Recommended Requirements.
So i need only VGA
But one of my fr said my mother board and Processor is not good for playing Crysis
That is why i want to change my MB and CPU.:6::6::6:
Crisis game use all resource of CPU.
Nvidia card also use CPU resource to boostup graphic performance.
So CPU can be bottleneck.
If you can spend more, Q6600 quad-core is more suitable, but core2duo also can be used.
About your motherboard, even idon't like that brand, you can use it if it is in stable.
But i can't play very well
i use my fr's VGA card that you said to me !
ထစ် နေ တယ်
brand and model of that vga please..
game resolution and effect please..
brand mean ASUS, Saphaire, Gigabype, MSI, Innovision, Eagle, ...
model means, EN8500GT Silent/HTP/512M, NX8500GT....
you should to buy 256mb of msi graphic card,if you buy it you can play the hot game with good performance
အဲဒီမှာ ကွန်ပျူတာ၀ယ်ရင် ရောင်းရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာ တွက်ချက်ပေးပါတယ်။
သွားကြည့်လိုက်ပါ..... အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ :103: :103:
ဒါများဗျာ... ကျနော့်စက်ဆိုဘယ်လိုလုပ် မလဲ
Cpu P4 Celeron 2.4
Board Asus P5GCMX ပေါပေါကြီး
Graphics က nVidia 8400 GS 512M
Memory Dual 1Gx2 = 2G
Crysis အေးဆေး ဆော့လို့ရပါတယ်... ကျနော်ဆို ဆော့လို့အောင်သွားပေါ့(ကြွားတာ)
Graphics detail တော့ low ထားထားရတာပေါ့ဗျာ..
ဒါတောင် CPU မနိုင်လို့... smooth ပဲ... အခုတောင် Far Cry2ဆော့မလို့လုပ်နေပီ.. Install လုပ်လိုက်ဦးမယ်... :P
ဂရပ်ဖစ်ကဒ်လဲပြီး memory တိုးလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါ...